Ama-noodle asheshayo we-ASUS ROG - ukuthanda kanjani lokhu, u-Elon Musk? | TeraNews.net
Ama-noodle asheshayo we-ASUS ROG - ukuthanda kanjani lokhu, u-Elon Musk?
umbhali Nikitin Eugenius Kushicilelwe ku 21.06.2021
Imikhiqizo yokudlala yochungechunge lwe-ASUS ROG (Republic of Gamers) iyaziwa ngabantu emhlabeni jikelele. Wonke umuntu uyazi ukuthi i-ROG ingumkhiqizo wekhwalithi engenakulinganiswa engasetshenziswa ezimweni ezinzima kakhulu. Ama-laptops, amabhodi womama, amakhadi evidiyo, ama-game manipulators - noma yiluphi uhlobo lwemishini luyala inhlonipho. Futhi kwesinye isikhathi umona wabanye. Futhi umkhiqizo opholile waseTaiwan wanquma ukuluqhubekisela phambili. Ama-noodle asheshayo we-ASUS ROG asemakethe. Uzwe kahle - umkhiqizo kafulawa ngokufakwa kwezinongo namafutha, okudingayo nje ukuthi uthele amanzi abilayo bese umboza ngesembozo imizuzu embalwa.
Futhi akukho lutho oluyinqaba kulokhu, njengoba kubonakala, ekuqaleni. Inkampani iTaiwan TTL sekunesikhathi eside ikhiqiza iziphuzo ezidakayo, inika abalandeli bemidlalo yekhompyutha ukuphumula phambi kwesikrini sekhompyutha. Ama-noodle ayisixazululo esihle sokugcwalisa umzimba wakho ngaphandle kokuphazanyiswa ku-gameplay.
Ama-noodle asheshayo we-ASUS ROG - intengo, lapho ungathenga khona
Ngokunikeza abadlali ukuthi bathenge ama-noodle, umenzi wayengalindelanga ukuthi lezi zindaba zibange umsindo omkhulu emakethe. Ama-noodle abhalwe uphawu lwe-ROG asevele efake izigidi zabathengi. Cishe yonke inkundla yokudlala igcwele imibuzo - lapho ungathenga khona ama-noodle asheshayo we-ROG. Konke esikwazile ukukuthola, ekuqaleni, umenzi uzonikeza amabhokisi ama-noodle (isisindo 2.4 kg) kubo bonke abathengi bama-PC wokudlala we-ASUS ROG.
Akukho okushiwoyo ngokuthengisa ama-noodle ezitolo. Kungenzeka ukuthi izimpahla ngeke zifinyelele emashalofini ezitolo okwamanje. Njengoba lokhu kungazuzisi ngokuphelele kumenzi. Vumelana, kungcono ukuthengisa uhlelo olubizayo, umzila noma ilaptop, ephelele nebhokisi lama-noodle. Kunokuthi ube nemali engenayo eseceleni kusuka ekuthengisweni kwala ma-noodle. I-ASUS iyayazi indlela yokwenza imali.
Ngendlela, ama-noodle e-ROG anganambitha emhlabeni obonakalayo. Imidlalo ye-ROG ithole lo mkhiqizo omuhle njengokudla kwamaqhawe abonakalayo. Okungenani izikhangiso kumathoyizi ase-Asia zigcwele izimangalo ezinjalo. Konke kubukeka njengokuhlekisa abalandeli balo mkhiqizo. Kepha okungenani ngale ndlela ungabona ukwakheka nokupakishwa kwama-noodle asheshayo. Kuyadabukisa ukuthi izinhlelo zokusebenza zemidlalo azidlulisi iphunga noma ukunambitha. Kungaba mnandi ukunambitha ukulungiswa nokuhlola ikhwalithi yayo ngaphambi kokuthenga.
I-Dune: Izidingo Zesistimu ye-Spice Wars
I-Klipsch T5 II True Wireless Anc – I-Premium TWS Earbuds
Ama-headphones anosayizi ogcwele avaliwe i-Beyerdynamic MMX 150
I-UFS 4.0 - AbakwaSamsung baphula ama-stereotypes
I-Nokia N73 flagship imenyezelwe ngekhamera engu-200 MP
I-Drone DJI Mini 3 Pro inesisindo esingu-249 amagremu kanye ne-cool optics
I-Apple, iGoogle kanye neMicrosoft Oppose Repair Rights Act
I-Dune HD RealBox 4K Ibhokisi le-TV: Okufanele Ukuthenga
I-MiTo MT3 Noctua Keycap Set - isonqenqemeni lokuhlanganyela okusha
Yini i-Wi-Fi 6, kungani idingeka futhi ayini amathemba